DAAWO:Dhaqtarkii jar jaray Jamal khashoggi oo laga helay cadeeymo argagax kunoqday Turkida inta howl galka socday. – Xeernews24
DAAWO:Dhaqtarkii jar jaray Jamal khashoggi oo laga helay cadeeymo argagax kunoqday Turkida inta howl galka socday.
17. Oktober 2018 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Sida laga soo xigtay qaar kamid ah saraakiisha sar sare ee dalka Turkiga ayaa shaaciyay shaqsiga jar jaray wariye Jamaal khashoggi oo labadii bishaan lagu dhex dilay qunsuliyada sacuudiga kuleeyahay magaalada Istanbul.
Sargaal Turkiga ayaa sheegay in hayaan shaqsiga dilay wariyahaas kasoo ah dhaqtar katirsan ciidamada sacuudiga waxuuna saraakiisha kale ka codsaday in ay sii dhageystaan muusik inta uu jar jaraayo khashoggi.
Arintaan ayaa argagax kunoqotay bulshada caalamka waxaana laga yabaa in dhacdadaan Sacuudiga kala kulmaan ciqaab adag madaama si xun u dileyn wariye Jamaal khashoggi ayuu yidhi sargaalkan Turkiga ah oo magaciisa qariyay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/10/74-16.jpg 720 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-10-17 18:06:262018-10-17 18:23:24DAAWO:Dhaqtarkii jar jaray Jamal khashoggi oo laga helay cadeeymo argagax kunoqday Turkida inta howl galka socday.
War-murtiyeedka kulankii wasiiradda arimaha dibedda Soomaalia, Ethiopia iyo... Itoobiya oo xilal Muhiim ah u magacawday qaar kamid ah Jabhadihii hubeysnaa...